Warshadaha Kala Sooca Shiinaha iyo soosaarayaasha Shiinaha | Boselan
Kala-sooc madax-bannaan oo ah CSTR, oo ku habboon shirkadaha wax-soo-saarka noolaha yar-yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo mashaariicda horumarinta beeraha ee gaarka loo leeyahay. Kala-soocidda hayaha gaaska iyo haanta anaerobic waxay fududeyneysaa maareynta iyo keydinta gaaska, iyo sidoo kale dayactirka qalabka. Ganacsiyada iyo beeraha. oo leh awood soosaar weyn oo gaas ah, hayaha gaaska gaarka ahi wuxuu kaydin karaa gaaska isagoon wax khasaare ah geysan. Waxay ku siin kartaa kuleylka, dhalinta korantada iyo karinta si joogta ah. Marka lagu daro jiilka tamarta qorraxda, waxay gabi ahaanba gaari kartaa nidaam dhaqaale oo isku filan oo deegaanka ah.
Hore: Isdhaxgalka CSTR
Xiga: Is dhexgalka kooxda CSTR